Casho Sharaf Si Heersare Loo Agaasimay, Jaaliyada Iyo Waxgaradka Bariga London Ku Sagootiyeen Maareeye Ibraahim Siyaad Yoonis | Duul News International
Casho Sharaf Si Heersare Loo Agaasimay, Jaaliyada Iyo Waxgaradka Bariga London Ku Sagootiyeen Maareeye Ibraahim Siyaad Yoonis	London:(Duulnews)-Waxa bariga magaalada London ka dhacday casho sharaf isugu jirtay soo dhaweyn iyo sii sagootin lagu maamuusay Maareeye Ibraahim Siyaad Yoonis oo beryahnba socdaal shaqo iyo shirar caalami ah oo uu ka qayb galay u joogay dalkan UK. Casuumadan oo si heersare ah loo soo agaasimay waxaa isku soo dabariday Jaaliyada iyo waxgaradka bariga London ee UK. Xubnihii jaaliyada waxaa aay halka uga soo jeediyeen maareeyaha xilkasnimada iyo masuuliyada ka muuqatay waxqabadka uu muujiyey intii xukuumadani aay xilka haysay. Waxay kaloo hadaladu isugu jireen hanbalyeyn iyo guubaabin farabadan oo aanay u kala hadhin xubnihii isugu jiray masuuliyiinta iyo waxgaradka jaaliyada bariga London. Intaa kadib waxaa hadalkii u baxay oo halkaa ka soo jeediyey warbixin kooban oo ku saabsan howlaha uu UK u yimi wixii uga qabsoomay iyo guud ahaanba xilka ama shaqada uu qaranka JSL u hayo.
Maareeye Ibrahim Yoonis wuxuu ugu horeyn mahadnaq balaadhan u soo jeediyey waxgaradka sida sharafta iyo maamuusku ku jirto ugu soo dhaweeyey..isla markaana sagootinta u sameeyey. Mar uu ka hadlayey mashruuca ugu weyn Somaliland marka laga yimaado Wadada Sanaag-Togdheer in uu yahay biyo galinta caasimada Hargaysa ” Waxaa noo qorshaysan in biyo galinta caasimada Hargaysa aay soo gebagabowdo dhamaadka sanadka 2016″
Waxa kale oo uu si kooban uga hadlay shirkii caalamiga ahaa ee uu yimi uk ” shirkaasi wuxuu ka dhacay jaamacad ku taala magaalada Loughborough, waxa aniga iyo teamkii ila socday aanu ka soo jeedinay warbixin ku saabsan biyo galinta Hargaysa.. oo mashruucii ugu danbeeyey uu ahaa dagaalkii ka hor 1986 kaas oo laagu talo galay kali ah 150kun oo qof imikana 1 million shicibka hargaysa kor waynu dhaafeen. Halkaa ayaana laga dheehan karaa baahida baaxada taala. Muhiimada shirka oo wadamo badan ka soo qayb galeen waxay ahayd biyo fidinta iyo fayo dhowrka biyaha”
Mar wax laga waydiiyey arimaha biyaha yaraaday ” Waxaa aad u hoosaysa tayada mishiinada oo mararka qaar xumaada isla markaana xalinta ciladahaas aay mudo aan badnayn qaataan, hadana baahida biyaha marka loo eego uu wakhtigaasi aad u badan yahay. Waxa kaloo saamayn ku yreshay xaga gaadiidka biyaha, biyo la’anta iyo abaarta badan ee ka jirta dhinca gobolada Awdal iyo Salel”
Ugu danbayn waxa aay xafladaasi ku soo gebagabowday sidii loogu talo galay iyo si ka sii wacan.